I-Waterfront Sunrise Cottage
Indlu yangasese yangasese yangasese i-15 mins emantla e-Owen Sound kumanzi acwebileyo e-Georgian Bay.
Ngeenyawo ze-150 zonxweme olukwabelwana kuphela kunye ne-cottage engummelwane, yonwabela ukuphuma kwelanga okumangalisayo, phumla kwindawo yokuphumla, hamba ukuya kuqubha, i-kayak, ibhodi yokubheqa, ukuloba okanye ube nomlilo wenkampu kunye neenkwenkwezi.
Sebenzisa i-cottage yethu njengendawo yokutsiba kwiindawo ezininzi zokuhamba ecaleni kweBruce Trail, iSauble Beach (35min), iTobermory (70min) kunye nezinye ezininzi. Okanye vele usebenze ukusuka apha ngelixa ukonwabela umbono omkhulu kunye ne-wifi.
Kutshanje, le ndlu inekhitshi entsha kunye negumbi lokuhlambela kunye namagumbi amabini okulala.
Igumbi lokulala elikhulu linomandlalo webhedi ophindwe kabini kunye nebhedi engamawele ngaphantsi kwayo. Igumbi lokulala elincinane linomandlalo wamawele kwaye alikho labucala kuba umntu kufuneka adlule kulo ukuze afike kwigumbi lokuhlambela.
Indawo yokuhlala yangoku kodwa intle kwaye itofotofo ijonge ngaphandle kwibhanki ebanzi yeefestile ukuya kumbono omhle phezu kwamanzi.
Ngaba kukho abantu abongezelelweyo?
ENTSHA! Kutshanje sidwelise i-bunkie yethu ehlaziyiweyo ukwenzela abantu abanabantwana, oomakhulu nootatomkhulu okanye abahlobo abangathanda indawo yabucala kubo. Yijonge apha:
Iindlwana ezimbini kule propati zineenyawo ze-150 zamanzi, imbono engakholelekiyo yeGeorgian Bay kwaye isondele kwizinto ezininzi abantu abathanda ngazo malunga nePeninsula yaseBruce.
Siya kuba ngamaxesha athile kwi-cottage sihlala sisenza iiprojekthi ezahlukeneyo. Ungazigcina kuwe okanye ube nentlalontle. Yiza ucele nantoni na onokuyidinga kwaye ukuba asikho sifumaneka ngefowuni.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Kemble